सलाम छ ! यी महान छोरीलाइ, जसले आ’फ्नो क’लेजो का’टेर दिएर पि’तालाई ब’चाइन्’ – Life Nepali
सलाम छ ! यी महान छोरीलाइ, जसले आ’फ्नो क’लेजो का’टेर दिएर पि’तालाई ब’चाइन्’
सलाम छ ! यी महान छोरीलाइ, जसले आ’फ्नो क’लेजो का’टेर दिएर पि’तालाई ब’चाइन्’ काठमाडौ। डेढ महिनाअघिसम्म काठमाडौं, हात्तीगौंडाका ५८ वर्षीय पदमबहादुर मल्ललाई खुसीका दिन आउलान् जस्तो लागेको थिएन । न त शरीर नै यति तन्दुरुस्त होला भन्ने लागेको थियो। एक वर्षअघि आफ्नो कलेजो बिग्रिसकेको थाहा पाएपछि मल्ल परिवारमा खुसी हराएको थियो।एक वर्षदेखि रक्सी सेवनका कारण कलेजोमा सिरोसिस भएपछि उनको यस्तो हविगत भएको थियो। ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, *****
Previous सरकारी कर्मचारीकि श्रीमती भन्छिन: श्रीमानले मान्नुभएन अहिले सम्म १७ ओटा बच्चा फा’लिसकेँ’